ရခိုင်သီချင်း အဟောင်းလေးတွေ စုစည်းထားတာပါ။ မောင်လူအေး စုစည်းတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီ စာမျက်နှာကနေ Download လုပ်ချထားတာပါ။ ရံဖန်ရံခါမှာ Download လုပ်ဖို့ အဆင်မပြေ ဖြစ်လေ့ ဖြစ်ထရှိလေတော့ Download လုပ်လိုသူများ အတွက်လည်း အဆင်ပြေအောင် ပြန်တင် ပေးလိုက်ခြင်းပါဗျာ။
ချစ်ပန်းလည်းခူး ဆူးလည်းစူး - သန်းမောင်
လှိုင်းလုံးချေ - မလတ်
အချစ်ပုစ္ဆာ - စောထွန်းအောင်
ပန်းသဇင်၏အယူခံ - သန်းမောင်၊ မလတ်
၀ီးလို့ကျန်လိုက်မြို့စစ်တွေ - သန်းမောင်
နှုတ်ဆက်ခရေ ကံ့ကော်မြေ - ယုယုလှိုင်
ရိုးရာကမမ - သန်းမောင်
နွီအလွမ်း - ယုယုလှိုင်
အကြွင်းမဲ့ဘ၀ - သန်းမောင်
ဝီး ..ဝီးလို့ကျန်ခိုက် မြို့ဆိုက်တွေ ... ဆိုတာလေး။
မောင်လူအေးကလဲ အဲဒီဖက်ကဘဲလား (မရဲတရဲမေးသွားသည်။ပြည်မှာကျောင်းတက်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတော့ သေချာသလောက်ပါဘဲ။ ဘယ်နှစ်ဆင်းတုန်း။ PGTI Network ရှိတာသိလား။ http://pyaygti.ning.com/ တဲ့)
မောင်လူအေးက ပြည် ဂျီတီအိုင်ကနေ ၂၀၀၀ ခုနှစ် မတ်လမှာ ပြီးတဲ့ Batch ပါ။ Pyay GTI ရဲ့ GTI ဘ၀ နောက်ဆုံးနှစ်များထဲက တစ်နှစ်ပေါ့။ မောင်လူအေးတို့ ကျောင်းပြီးတာနဲ့ GTC ဖြစ်သွားတော့တာပါပဲ။
အယင်တော့ www.pyaygti.blogspot.com နဲ့ www.pyaygti.webs.com ဆိုပီး Create လုပ်ဖူးပါတယ်။ ခု http://pyaygti.ning.com လေးက ပိုပြီး Interactive ဖြစ်တာ တွေ့ရပါတယ်။ ပိုကောင်းပါတယ်။ Create လုပ်တဲ့ ကိုမျိုးမင်းကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရမှာပါ။
ဟုတ်ကဲ့ ကိုDBA မရဲတရဲ မေးသလိုပဲ ၀ီးလို့ကျန်လိုက် မြို့စိုက်တွေ... ဘက်ကပါပဲဗျ...
ဝေး.. ဝေးလို့ ကျန်လိုက် မြို့စစ်တွေ...
ကျွန်တော်လဲ ဆိုချင်တယ်.. ဝီး.. ဝီးလို့ ကျန်လိုက် မြို့သံတွဲပေ့ါ.. အဟီး.. သံတွဲသားမို့ပါ..
ငါလဲ ဒွါရာဝတီကပါ.လှိုင်းလုံးချေကို အရမ်းကြိုက်ခဲ့တာပေါ့
တစ်ခါပြန်လည်ကြားချင်တာနဲ့ နှစ်တွေကြခဲံ့ပြီးမှ ပြန်ရှာခဲ့တယ်..
ပြန်ရရှိခဲ့တဲ့အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်တယ် ကိုလူအေးရေ..
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် တစ်ခုတွေ့တာက MrDBA က မိသားစုက
လားမသိဘူးနော်..ဟုတ်တယ်ဆိုရင်တော့..ဂျူနီယာ ကို သူသိနိုင်
အကိုရို့ပြောစကားတိကိုကြားရလို့ ပျော်ရွှင်မိပါရေ...း)
ရမ္မ၀တီကပါ ဂျီတီစီဘ၀နန့်ကျောင်းပြီးပါရေ ။
Havealook at my blog post :: www.aboriginaljobseeker.com
My homepage eensm.org
Here is my page; http://www.szakibazis.com/blogs/entry/Review-Hotel-Ifach-In-Calpe-Spain-2013-05-02
My web page; http://website.kamsgraphics.com/link/11429
Havealook at my blog; oakstree.com
utilizing? I'm having some small security issues with my latest site and I'd like to find something more safeguarded. Do you have any solutions?
Check out my blog :: Chatalone.com
I did alternatively experienceafew technical issues using
this web site, since I experienced to reload the sitealot of instances previous to
were wondering if your web hosting is OK? No longer that I'm complaining, however sluggish loading instances instances will often impact your placement in google and could injury your quality score if advertising and ***********
Here is my web page: http://creativecommunity.altervista.org/activity/p/20786